नेपाल प्रहरीका ७२ डीएसपीको सरुवा, को–कहाँ पुगे ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल प्रहरीका ७२ डीएसपीको सरुवा, को–कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)
काठमाडौंः नेपाल प्रहरीका ७२ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को सरुवा भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णय अनुसार डीएसपीहरुको सरुवा गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस ७७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ? (सूचीसहित)
ट्याग्स: डीएसपी, नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालय